Home News Madaxweyne Lafta-gareen oo magacaabay wasiiro cusub!!
Madaxweyne Lafta-gareen oo magacaabay wasiiro cusub!!
Wareegto kasoo baxday Madaxweynaha Maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa lagu soo dhameestiray golaha Wasiirada cusub uu maamulkaasi yeelanayo, waxaana wasiiradan cusub u badan yihiin dhalinyaro Siyaasada u cusub.
Madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen ayaa golihiisa Wasiirada maanta dhameestiray, waxa uuna soo magacaabay 15 Wasiir iyo 25-Wasiir kuxigeen, waxa uuna horey Madaxweynaha usoo magacaabay 10-Wasiir.
Halkan ka Akhriso Magacyada Wasiirada Cusub